Chii chekuona munharaunda yeCimadevilla kuGijon | Kufamba Nhau
Chii chekuona munharaunda yeCimadevilla
Susana Garcia | | General, Gijon
El Cimadevilla nharaunda iri muguta reGijon uye ndechimwe chechokwadi kwazvo chatinogona kushanyira. Kana tichizoenda kuguta reAsturian isu tichafanirwa kupfuura nharaunda yaro inonyanya kuzivikanwa, izere nenzvimbo dzinoyevedza uye nemhepo huru, kunyanya mumwaka wakakwira. Ndosaka iri nzvimbo yakakosha pakushanyira Gijon.
Kana uchizoona iyo guta reGijon iwe unofanirwa kupfuura nemunharaunda ino yenhoroondo, chapupu chemarudzi ese ezviitiko. Iyo ndiyo dangwe muguta uye inoziva maitiro ekuenderana nenguva itsva. Nhasi tinowana nzvimbo izere nehupenyu asi iyo zvakare ine yakasarudzika runako.
1 Nzira yekuenda kunharaunda yeCimadevilla
2 Nhoroondo yeCimadevilla
3 Cerro de Santa Catalina uye Kurumbidza kweiyo Horizon
4 Rusvingo rweRoma nemabhati
5 Revillagigedo Muzinda
6 Jovellanos Nzvimbo yekuzvarwa
Nzira yekuenda kunharaunda yeCimadevilla
Iyi nharaunda iri muguta reAsturian reGijon, iro rinogona kusvika nyore nemotokari. Iyo nharaunda iri panzvimbo yeSanta Catalina peninsula uye zviri nyore kwazvo kusvika uye kuiwana, nekuti isu tinogona kungoteedzera yekufamba kubva kumahombekombe uye ona kumagumo nzvimbo yeCimadevilla. Kune mapaki emota akati wandei padyo uye mamwe zvakare ari munzvimbo yeCimadevilla, asi zvinogara zvirinani kusiya mota yako munzvimbo nyowani uye kufamba. Saka isu tinogona zvakare kuona chikamu chenharaunda yazvino yeguta nemahombekombe, iyo yakanaka kwazvo uye ine yakakura nzvimbo yekufamba.
Cimadevilla ndiyo yaive nharaunda yekare kuguta iri uye yaive pachikomo chine rusvingo. Pachikomo ichi pane imba ye'Guild of Mareantes de Santa Catalina ', dangwe muguta. Muzana ramakore regumi nemanomwe chikomo chemauto chakakwidziridzwa kuchengetedza guta nemahombekombe kubva pakurwiswa nepirate negungwa. Ndiyo nzvimbo iyo yakatove nekuvapo kwevaRoma, iyo inotipa pfungwa yekukosha kwayo kwakakosha nekuda kwemamiriro ezvinhu akatarisana negungwa uye pachikomo chakasarudzika nemafungu aisimuka. Muzana ramakore rechi XNUMX, chiteshi chebhizimisi chakavakwa icho chinogumisa uku kuzviparadzanisa ndokushandura iyi nharaunda kuva pekugara chavafambisi vengarava neveredzi, sezvazvinozivikanwa nhasi, sedunhu rekare revaredzi, iro raive iro bhizimusi guru muguta. Mumakumi emakore achangopfuura ino nzvimbo yakavandudzwa uye yakawana kukosha kwenhoroondo yayo Zvivakwa zvakagadziriswa uye kuvapo kwazvo kwakagadziridzwa nekuti inzvimbo inoshanya kwazvo.
Cerro de Santa Catalina uye Kurumbidza kweiyo Horizon
Chikomo cheSanta Catalina nhasi inzvimbo yakanaka kwazvo yebindu, yakanakira kufamba uye kwaunogona kuona vanhu vachiita mitambo kana kufamba nezvipfuyo zvavo. Ichi chikomo chinotipa kwakakura kuona kweguta, sezvazviri munzvimbo yepamusoro, uye zvakare yegungwa uye kumusoro. Munharaunda ino ndimo mune tinogona kuwana rakakurumbira basa raChillida rinonzi Elogio del Horizonte. Icho chihombe chekongiri chakavezwa, chine hukuru hunoshamisa hwakavakwa munzvimbo iyi muna 1990. Icho chifananidzo chinogadzirisa chikamu chekare cheguta uye kuti kuwedzera pakuve nekuvapo kukuru kunogadzira ruzha nekuda kwemhepo, chimwe chinhu chiri kurova.
Rusvingo rweRoma nemabhati
Masara mashoma eakasara eRoma munharaunda yeCimadevilla, asi isu tinogona kuwana zvisaririra zvemabhawa ekare eRoma eCampo Valdés. mabvazuva nzvimbo yekuchera matongo yakawanikwa pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX asi zvaisazodzoka kwaari kusvika mushure meHondo Yenyika uye pakupedzisira mumaXNUMX. Nhasi tinogona kuona chikamu chemabhati eRoma akavakwa muzana ramakore rekutanga uye madziro eguta rekare.
Munzvimbo iyi yekare yeguta mune zvakare nzvimbo yemamwe madzimba akadai Revillagigedo, inozivikanwawo se Imba yeMarquis yeSan Esteban de Natahoyo. Muzinda uyu uri padyo nemarina yazvino yeguta. Iyo yakanaka muenzaniso weiyo Asturian palatial dhizaini yezana ramakore rechiXNUMX. Iyo ine yakanaka Baroque maitiro uye maviri akachekwa shongwe, ine heraldic nhoo kumberi kwefaçade. Iyi yakanamatira chapel ndiyo yeCollegiate Chechi yeSan Juan Bautista, yakavakwa munzira yeBaroque uye yakapera makore mashoma mushure meimba yamambo. Ivo vaviri vanoita yakanaka seti mutaundi rekare.
Jovellanos Nzvimbo yekuzvarwa
Uyu imba yekuzvarwa inozivikanwa seJovellanos Museum. Iyo imba yehukama kubva muzana ramakore regumi nemashanu riri remhuri yeJovellanos. Iine shongwe mbiri pamativi uye nechurch yakanamatira. Chikwere chiri pamberi peimba chinonzi Plaza de Jovellanos. Mu museum unoona makamuri akatsaurirwa kune hupenyu hwaJovellanos. Kune rimwe divi, tinogona kuona mamwe makamuri ekuti unakirwe nemabasa nemaAsturian maartist ezana ramakore rechiXNUMX.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Chii chekuona munharaunda yeCimadevilla
Cala Llombards muMallorca